*Casale Stella* ifulethi elimnandi kwindawo eluhlaza
Igumbi elinomnyango ophumela ngaphandle yonke sinombuki zindwendwe onguValeria
Ifulethi elimnandi kwindalo enabo bonke ubutofotofo. Ukupaka kwangaphakathi, kubiyelwe ngokupheleleyo, kunokwenzeka ukugcina abantwana okanye izilwanyana zasekhaya ziseluxolweni.
Ibarbecue, iibhayisekile ziyafumaneka, igadi enkulu yokuphumla Imfihlo iqinisekisiwe ngocingo, iinethi emnyama kunye nendawo yokungena ezimeleyo. Indawo yomlilo, umatshini wokuvasa, umoya, ishawari ebanzi. Isidlo sakusasa asihanjiswa, kodwa kukho imfuneko yokufumana isiqabu sakusasa ngokukhawuleza xa uhlala ixesha elifutshane. Kuyenzeka ukuthenga iimveliso kumhlaba wethu!
4.75 ·Izimvo eziyi-20
Indawo ezolileyo kakhulu, phakathi kweendawo zomnquma kunye nezidiliya, ilungele ukuhamba kunye nokukhwela ibhayisekile Iikhilomitha ezimbalwa ukusuka edolophini kunye nolwandle olubonelela ngeenkonzo eziyimfuneko kunye nezolonwabo.
Sono una persona tranquilla e pacifica,adoro la natura e gli animali.Vivo qui con la mia famiglia e spero questo posto che amo possa trasmettere anche ai miei ospiti la stessa serenità che ha regalato a me negli anni!Non ho pregiudizi su nessuno,rispetto tutti e gradirei ricevere lo stesso dal prossimo
Sono una persona tranquilla e pacifica,adoro la natura e gli animali.Vivo qui con la mia famiglia e spero questo posto che amo possa trasmettere anche ai miei ospiti la stessa sere…
Iindwendwe zinokunditsalela umnxeba, ngomyalezo okanye ngokobuqu ukuba sisekhaya!